Ankazobe : Nirefodrefotra ny basy lasa ny volabe
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → mars → 17 → Ankazobe : Nirefodrefotra ny basy lasa ny volabe
Ny alakamisy lasa teo no nisehoan’ny fanafihana tao amin’ity tokantrano iray izay ao amin’ny tanàna antsoina hoe Ambohitsara, folo lahy ireo dahalo nirongo basim-borona no tonga nanafika tao. Tsy nisy alaharo fa tifi-danitra no nidirany tao an-tanàna mba hampitahorana ny olona. In-4 be izao ny feom-basy,ka rehefa vita izany dia niditra nandroba izy ireo, ny vola no notakian’ireto jiolahy; saika mbola nihodinkodina ity lehilahy valo amby dimam-polo taona, ka nokapohin’ireto mpanafika vodibasy ny lohany.
Naratra be tamin’izany ilay rangahy, ka tsy maintsy namoaka ny tahiry tao an-trano, lasan’ireo dahalo tamin’izany ary ny vola mitentina 8 tapitrisa ariary sy ny volamena milanja 400g. Ny mahagaga amin’ny toe-javatra tahak’itony dia toa efa voairaka ilay olon-dratsy na koa mety ny olona manodidina ilay voatafika ihany no manome ny andinindininy amin’izay entana na volabe ao an-trano.
Tongotra ankatoka ny an’ireto dahalo vao azon-dry zalahy ny tadiaviny, niezaka ny niantso ny zandary farany izay haingana teny an-toerana ihany ny tompon-trano, saingy efa nadio ny rano nitana, efa eo am-panaovana famotorana amin’izay mety ho nahavanon-doza ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena any Ankazobe amin’izao fotoana izao .Hotaterina amintsika eto ihany ny fizotran’ny toe-draharaha. Efa mahazatra ny jiolahy andray tato ho ato ny manapoaka basy mba hanaovana ramatahora ny mponina ,hanomana izay entana azo robaina na vola homena irao olon-dratsy, toy ny manao hoe tsy ijanonan’izy ireo ela eo an-toerana. Ny olona rahateo koa vao maheno feom-basy dia tsy sahy ny hanohitra na hitady làlana handosirana intsony fa efa mby an-koditra ny raharaha.